Ungazikhuphela njani iividiyo ezinde ze-Youtube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungazikhuphela njani iividiyo ezinde kwi-YouTube?
Ukukhuphela iividiyo ezinde kwiqonga leYouTube kulula. Ukufezekisa le njongo, abasebenzisi baneendlela ezizezinye, uninzi lwazo lusimahla. Ukuba unayo ividiyo ofuna ukuyikhuphela kwisicelo kwaye awazi ukuba ungayenza njani, siyakumema ukuba ungaphambuki kwinqaku elilandelayo.
Kwi-intanethi sinokufumana amaphepha amaninzi kunye nokusetyenziswa okunokusisebenzela xa ukhuphela iividiyo ezinde kwi-YouTube. Eyona nto icetyiswayo kwezi meko kukuba nonxibelelwano oluqinisekileyo lwe-intanethi ukuqinisekisa ukuba ukhuphelo lwenziwa ngexesha elincinci.
Iindlela zokukhuphela iividiyo ezinde ze-Youtube
Ngaba uzama ukukhuphela ividiyo ende ye-YouTube kwaye awukwazanga? Namhlanje sifuna ukukubonisa ezinye zezona zixhobo zibalaseleyo zokukhuphela umxholo wexesha elide ogcinwe kuleqonga levidiyo elidumileyo.
Abasebenzisi be-YouTube banayo iindlela ezahlukeneyo zokukhuphela iividiyo ezinde kwi-YouTube. Enye yeendlela ezilula zokwenza oku kungokukhuphela amaphepha afumanekayo kwiwebhu. Apho kufuneka sincamathisele ikhonkco levidiyo esifuna ukuyikhuphela kwaye yiyo loo nto.
Nangona kunjalo, Kukwakho nezinye izicelo eziphathwayo Ingaluncedo kakhulu kwezi meko. Namhlanje sizisa enye yezona zilungileyo kwaye mhlawumbi yenye yezona zisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi bewebhu. Esi sisicelo se-Snappea se-Android.
Awazi ukuba isebenza njani? Subanexhala. Apha sichaza inyathelo ngenyathelo ekufuneka sililandele ukukhuphela nayiphi na ividiyo ye-YouTube ende ngokusebenzisa esi sicelo.
Amanyathelo okukhuphela iividiyo kwi-app ye-Snappea
Uhlelo lokusebenza lwe-Snappea lwe-Android yenye yezona zidume kakhulu kwiwebhu, Ayisiyiyo kuphela indlela ekulula ngayo ukukhuphela iividiyo kodwa ngenxa yeminyaka ibisemarikeni. Ukukhuphela nayiphi na ividiyo ngale app kulula kakhulu kwaye kuyakhawuleza.
Khuphela usetyenziso lweSnappea kwiwebhu
Ukuba ufuna ukukhuphela usetyenziso lweSnappea kwisixhobo sakho esiphathwayo Kuya kufuneka uyenze ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yeSnappea.com kuba usetyenziso alufumaneki kwiVenkile yokudlala.
Kuya kufuneka ufake iphepha lesicelo kwaye Khuphela ifayile ye-APK. Emva koko konke okufuneka ukwenze kukuqalisa inkqubo yokufaka kwisixhobo sakho.
Khumbula ukwenza imvume isebenze ukuze iselfowuni ikwazi ukufaka usetyenziso olukhutshelweyo kwisikhangeli. Kufuneka uye kwicandelo lokuseta kwaye ucofe ukhuseleko. Apho iyenza isebenze ukhetho "ukufakelwa kwezicelo ezivela kwimithombo engaziwayo".
Khuphela iividiyo kwi-Snappea
Ukukhuphela iividiyo kwesi sicelo kulula kakhulu kwaye kuyakhawuleza. Zimbini iindlela zokwenza; Eyokuqala isebenzisa i-injini yokukhangela yesicelo kunye nokukhuphela iividiyo. Enye into onokuyenza kukukhuphela ikhonkco levidiyo yeYouTube kwaye uyincamathisele ngqo kwiinjini yokukhangela yeapp.
Khuphela iividiyo kwiPC
Unokuzikhuphelela iividiyo ezinde ngokuthe ngqo kwiPC ukusebenzisa iqonga leSnappea. Nanga amanyathelo ekufuneka elandelwe:
Ukufikelela kwiwebhusayithi yeSnappea (snappea.com)
Sebenzisa i umcebisi kwiphepha ukufumana ividiyo ofuna ukuyikhuphela
Unako kwakhona ukukopa Ngqo qhagamshela ividiyo kwi-Youtube kwaye uyincamathisele kwiphepha le-Snappea.
1 Iindlela zokukhuphela iividiyo ezinde ze-Youtube
2 Amanyathelo okukhuphela iividiyo kwi-app ye-Snappea
3 Khuphela iividiyo kwiPC
Ulawula njani ulwazi lwendawo yeakhawunti yakho?
Ukuguqula ukubonakala kunye nabafowunelwa beakhawunti yakho? Twitter